ဧရာ (မန္တလေး) ☸ နိကာယ်ငါးရပ် မိတ်ဆက် ☸ - MoeMaKa Media
Home / Ayer (Mandalay) / Literature / Thoughts / ဧရာ (မန္တလေး) ☸ နိကာယ်ငါးရပ် မိတ်ဆက် ☸
ဧရာ (မန္တလေး) ☸ နိကာယ်ငါးရပ် မိတ်ဆက် ☸
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါက ဗုဒ္ဓဟောကြားသော တရားတော်တို့အား “ဓမ္မဝိနယ” ဟု ရည်ညွှန်း ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည့်အားလျော်စွာ၊ ပထမအကြိမ် သံဂါယနာတင်ပွဲတွင် ဓမ္မနှင့် ဝိနယဟု နှစ်စုခွဲ၍ ရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော် အားလုံးအား ဓမ္မဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည် မှန်သော်လည်း ဝိနည်း ဒေသနာတော်တို့အား ဝိနယ ဟုလည်းကောင်း၊ ဝိနည်းတော်မှ အပဖြစ်သော သုတ္တန်နှင့် အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်တို့အား ဓမ္မဟုလည်းကောင်း ခွဲခြား သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သံဂါယနာ တင်သောအခါတွင် ဝိနည်း၊ သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာဟူသော အစီစဉ်အားဖြင့် စုပေါင်းရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ပထမသံဂါယနာတင်ပွဲတွင် အရှင်မဟာကဿပ မထေရ်က စီစစ် မေးမြန်းသော “ပုစ္ဆက” ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည်။ ဝိနည်းအရာတွင် ဧတဒဂ်ရတော်မူခဲ့သော အရှင်ဥပါလိမထေရ်က ဝိနည်း ဒေသနာတော်အား ဖြေကြားသည့် “ဝိသဇ္ဇက” ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့၏။ သုတ္တန်နှင့် အဘိဓမ္မာဟူသော ဓမ္မ ဒေသနာတော်တို့အား “ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက” (တရားဘဏ္ဍာစိုး) ဖြစ်သည့် အရှင်အာနန္ဒာ မထေရ်က ဖြေကြား၍ သံဂါယနာ တင်တော်မူခဲ့ကြသည်။
ဤတွင်လည်း ဓမ္မဒေသနာတို့အား သဘောတူရာ တူရာစု၍ အောက်ပါအတိုင်း “နိကာယ (အစုအပေါင်း)” ငါးစုဖြင့် (တနည်း နိကာယ် ငါးရပ်ဖြင့်) စု၍ ခွဲခြားခဲ့ကြပါသည်။
(၁) ဒီဃနိကာယ - သုတ္တန်အရှည်များ စုစည်းထားသော အုပ်စု
(၂) မဇ္ဈိမနိကာယ - အလယ်အလတ်သုတ္တန်များ စုစည်းထားသော အုပ်စု
(၃) သံယုတ္တနိကာယ - အချင်းချင်း ဆက်နွယ်နေသော သုတ္တန်များအား စုထားသော အုပ်စု
(၄) အင်္ဂုတ္တရနိကာယ - အင်္ဂါအရည်အတွက်အလိုက်စုစည်းထားသော နိကာယ်
(၅) ခုဒ္ဒကနိကာယ - အရွယ်အစား သေးငယ်သော သုတ္တန်များနှင့် အဘိဓမ္မာဒေသနာအုပ်စု
“သုတ္တ”သည် “တမျဉ်းချည်၊ ပန်းသီတံ၊ ပန်းသီကြိုး”ဟု တိုက်ရိုက် အနက်အဓိပ္ပါယ်ရ၍ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မဒေသနာတို့အား ဖရိုဖရဲ မဖြစ်ရအောင် သီကုံးပေးထားသော ကြိုးသဖွယ် ယူဆနိုင်ပါသည်။ (ပါဠိဝေါဟာရ “သုတ္တ”အား သုတ်, သုတ္တန်, သုတ္တံစသဖြင့် မြန်မာမှုပြု လေ့ရှိသည်။)
🔹 ဒီဃနိကာယ (Collection of Long Discourses)
ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်များအား အကျဉ်းခြုံးလိုက်ပါက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟူသော အုပ်စုသုံးစုရသည်။ ဒီဃနိကာယ်တွင် ပါဝင်သော သုတ်များသည် သီလ, သမာဓိ, ပညာတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဟောကြားထားသော သုတ်များဖြစ်သည်။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၆၂-မျိုးအကြောင်း ဟောကြားသော ဗြဟ္မဇာလသုတ်၊ ရဟန်းပြုရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးကို အဇာတသတ်မင်းအား ဟောကြားထားသော သာမညဖလသုတ်၊ ဗုဒ္ဓ၏ နောက်ဆုံးကာလ ဖြစ်စဉ်များအား ဟောကြားထားသော မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၊ နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုရန် တစ်ကြောင်းတည်းသော လမ်းစဉ်ဖြစ်သည့် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ဟောကြားသော မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်၊ မိဘဝတ်, သားသမီးဝတ် စသဖြင့် လူမှုကျင့်ဝတ်များကို ဟောကြားထားသော သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ် တို့သည် ဒီဃနိကာယ်လာ သုတ္တန်များဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဒီဃနိကာယ်လာသုတ်များသည် ဘာသာခြားတို့အား ဗုဒ္ဓအဆုံးမ, ဗုဒ္ဓသာသနာကို လိုက်နာသူများ ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဟောကြားထားသော သုတ်များဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အသောကမင်းလက်ထက်တွင် အရှင်သောဏနှင့် အရှင်ဥတ္တရတို့သည် ဒီဃနိကာယ်၏ ပထမဆုံးသုတ်ဖြစ်သော ဗြဟ္မဇာလသုတ်ကို ဟောကြား၍ သုဝဏ္ဏဘုမ္မိအရပ်တွင် သာသနာပြုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
စုစုပေါင်း သုတ္တန် ၃၄-ပုဒ်ပါဝင်သော ဤဒီဃနိကာယ်အား “ဝဂ္ဂ (=အစု)” ခေါ် အစုသုံးစု ကျမ်းသုံးကျမ်း ခွဲခြားထားသည်။
(၁) သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂ (မြန်မာအခေါ် သုတ်သီလက္ခန်) - သုတ်ပေါင်း ၁၃-သုတ်
(၂) မဟာဝဂ္ဂ (မြန်မာအခေါ် သုတ်မဟာဝါ) - သုတ်ပေါင်း ၁၁-သုတ်
(၃) ပါထိကဝဂ္ဂ (မြန်မာအခေါ် သုတ်ပါထေယျ) - သုတ်ပေါင်း ၁၀-သုတ်
ပါဠိစာပေတို့တွင် ကျမ်းစာ၏ အရွယ်ပမာဏတို့ကို မရပ်မနားဘဲ တစ်ကြိမ်တည်း ရွတ်ဆိုနိုင်သော ပမာဏဖြင့် တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။ ယင်းပမာဏအား “ဘာဏဝါရ” ဟုခေါ်သည်။ တစ်ဘာဏဝါရတွင် အက္ခရာအလုံးရည် ရှစ်ထောင်ရှိသည်။ ဒီဃနိကာယ်အား ဘာဏဝါရဟူသော unit ဖြင့်တိုင်းထွာက ၆၄-ဘာဏဝါရ ရှိသည်။
🔹 မဇ္ဈိမနိကာယ (Collection of Middle Length Discourses)
မဇ္ဈိမနိကာယ်မှသုတ်များသည် အရွယ်အစားအားဖြင့် ဒီဃနိကာယ်မှ သုတ်များလောက် မရှည်လျားသော်လည်း၊ အခြားနိကာယ်များမှ သုတ်များလောက် တိုတောင်းခြင်း မရှိပေ။ ထို့ကြောင့်ပင် မဇ္ဈိမ (အလယ်အလတ်) နိကာယ်ဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မဇ္ဈိမနိကာယ်တွင် သုတ်အရေအတွက်အားဖြင့် ၁၅၂ သုတ်ရှိကာ၊ ကျမ်းတစ်ကျမ်းလျှင် သုတ် ၅၀-ခန့်ဖြင့် ပဏ္ဏာသ ခေါ် ကျမ်း သုံးကျမ်း ခွဲထားသည်။ ပဏ္ဏာသဟူသည် ငါးဆယ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
(၁) မူလပဏ္ဏာသ (ရှေးဦးအစ သုတ်ငါးဆယ်)
(၂) မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသ (အလယ် သုတ်ငါးဆယ်)
(၃) ဥပရိပဏ္ဏာသ (အဆုံးသုတ် ငါးဆယ်)
🔹 သံယုတ္တနိကာယ (Collection of Connected Discourses)
သံယုတ္တနိကာယ်တွင် သုတ်အရေအတွက်အားဖြင့် ၇၇၆၂-သုတ် ပါဝင်၍ ဘာဏဝါရအားဖြင့် ၁၀၀ ရှိသည်။ (ဘိက္ခုဗောဓိအလိုအရ သုတ်ပေါင်း ၂၉၀၄-သုတ်သာတွေ့ရသည်ဟု ဆို၏။ ရေတွက်ပုံကွဲလွဲ၍ ဖြစ်ပေမည်။) ကျမ်းတစ်ကျမ်းစီအား အကြောင်းအရာ တူရာတူရာအလိုက် သံယုတ္တခေါ် အခန်းများထပ်မံခွဲထားရာ ကျမ်း ၅-ကျမ်းတွင် စုစုပေါင်း သံယုတ် ၅၆-ခန်းပါဝင်သည်။ တစ်ဖန် ထိုသံယုတ်တို့ကိုလည်း သုတ် ၁၀-သုတ်ခန့်လျှင် ဝဂ္ဂ တစ်ခုစု၍ ထပ်မံခွဲထားပြန်သည်။
“သံယုတ္တ” ဟူသည် “အတူတကွယှဉ်တွဲပေါင်းစပ်ထားခြင်း”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ သံယုတ္တနိကာယသည် အကြောင်းအရာ တူညီသော သုတ္တန်များအား စုပေါင်းထားသော နိကာယ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သံယုတ္တနိကာယ်၏ ပထမတွဲ (သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်း)သည် ဂါထာဖြင့် ဟောကြားထားသည့် တရားတော်များအား စုစည်းထားသည်။ ဤကျမ်းအားလည်း ကောသလမင်းကြီးနှင့် ပတ်သက်သက်၍ ဟောကြားထားသော တရားတော်များအား ကောသလသံယုတ္တ၊ မာရ်နတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဟောကြာထားသော တရားတော်များအား မာရသံယုတ္တစသဖြင့် ထပ်မံ၍ ပိုင်းခြား စုစည်းထားသည်။
နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်းသည် အကြောင်း(နိဒါန)နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပုံ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟောကြားထားသော တရားတော်များဖြစ်၍၊ ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်းသည် ခန္ဓာငါးပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဟောကြားထားသော တရားတော်များဖြစ်သည်။ သဠယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်းတွင် အာရုံသိမှုအတွေ့အကြုံ (experience)၏ အခြေခံဖြစ်သော ဗာဟိရာယတန (external bases) ခေါ် အာရုံခြောက်ပါးနှင့် အဇ္ဈတ္တိကာယတန (internal bases) ခေါ် ဒွါရခြောက်ပါးတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော တရားများဖြစ်သည်။
မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်းတွင် သုတ်အရေတွက်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပမာဏအားဖြင့်ဖြစ်စေ အကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့် “မဟာဝဂ္ဂ”ဟု အမည်ရသည်။ မဂ္ဂင် ၈ပါး၊ ဗောဇ္ဈင် ၇ပါး၊ သတိပဋ္ဌာန် ၄ပါး၊ ဣန္ဒြေ ၅ပါး၊ သမ္ပပ္ပဓာန် ၄ပါး၊ ဗိုလ် ၅ပါးနှင့် ဣဒ္ဓိပါဒ် ၄ပါး ဟူသော ဗောဓိပက္ခိယ ၃၇ပါးနှင့် ပတ်သက်သော တရားတော်များ၊ ဈာန်, သစ္စာလေးပါး, အာနာပါန, သောတာပတ္တိမဂ်နှင့် စပ်လျဉ်းသော တရားတော်များ ပါဝင်သည်။
🔹 အင်္ဂုတ္တရနိကာယ (Collections of Numerical Discourses)
နိပါတ (နိပါတ်) ခေါ် အခန်း ၁၁-ခန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပထမအခန်း ဧကကနိပါတတွင် အင်္ဂါတစ်ပါးရှိသော သုတ်များ၊ ဒုတိယအခန်း ဒုကနိပါတ်တွင် အင်္ဂါနှစ်ပါးရှိသော သုတ်မျာ၊ တိကနိပါတ်တွင် အင်္ဂါသုံးပါးရှိသော သုတ်များ စသဖြင့် အခန်း ၁၁-ခန်းရှိသည်။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်သည် ဘာဏဝါရအားဖြင့် ၁၂၀ ဘာဏဝါရရှိ၍ သုတ် အရေတွက်အားဖြင့် ၉၅၅၇-သုတ်ရှိသည်ဟု အဋ္ဌကထာများကဆိုသည်။ (ဘိက္ခုဗောဓိအလိုအရ သုတ်ပေါင်း ၂၃၄၄-သုတ်သာတွေ့ရသည်ဟု ဆို၏။ ရေတွက်ပုံကွဲလွဲ၍ ဖြစ်ပေမည်။) နိပါတ်တစ်ခုစီအား ဝဂ္ဂ ခေါ် အစုများထပ်မံ ခွဲခြားထားရာ စုစုပေါင်း ဝဂ် ၁၆၀ ပါဝင်သည်။ ဝဂ်တစ်ခုစီတွင် အကြမ်းအားဖြင့် သုတ် ၁၀-သုတ်မျှ ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း အချို့ဝဂ်များတွင် ၇-သုတ်သာပါသည်ရှိသလို၊ အချို့တွင် ၂၆၂-သုတ်ထိပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။
🔹 ခုဒ္ဒကနိကာယ (Collections of Minor Texts)
ပထမ သံဂါယနာတင်ရာတွင် အရှင်ဥပါလိမထေရ်က ဝိနည်းဒေသနာတော်အား ဖြေဆို၍ စုပေါင်း ရွတ်ဆိုတော်မူခဲ့၏။ ထို့နောက် ဒီဃနိကာယ်၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ သံယုတ္တနိကာယ်နှင့် အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်တို့ကို ရှင်အာနန္ဒာမထေရ်က ဖြေဆို၍ သံဂါယနာတင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ သုတ္တန်ဒေသနာ၏ နိကာယ်ကြီးလေးရပ်အားတင်ပြီးနောက် အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကို ဆက်လက် တင်တော်မူကြသည်။ ထို့နောက်မှ ကြွင်းသောသုတ္တန်ဒေသနာ အတိုအထွာတို့အား ခုဒ္ဒကနိကာယ်အဖြစ် သံဂါယနာ တင်တော်မူခဲ့ကြသည်။ အချို့သောကျမ်းများ (ဥပမာ မိလိန္ဒပဉှာ)သည် ပထမသံဂါယနာတင်စဉ်တွင် မပါဝင်ပဲ နောက်မှ ထည့်သွင်းထားသော ကျမ်းများဖြစ်၍ အချို့က သံဂါယနာတင်ကျမ်းအဖြစ် အသိမှတ်မပြုကြ။ ခုဒ္ဒကနိကာယ်တွင်ပါသည့် သုတ္တန်ကျမ်း အရေအတွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမူအရ ၁၈-ကျမ်း၊ သီရိလင်္ကာမူအရ ၁၇-ကျမ်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမူ ၁၅-ကျမ်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမူအရ ဤသုတ္တန်ကျမ်း ၁၈-ကျမ်းကိုသာမက၊ ဝိနည်းနှင့် အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတို့ကိုလည်း ခုဒ္ဒနိကာယ်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
၁။ ခုဒ္ဒကပါဌ (ခုဒ္ဒကပါဌ်)
၃။ ဥဒါန (ဥဒါန်း)
၄။ ဣတ္တိဝုတ္တက (ဣတ္တိဝုတ်)
၅။ သုတ္တနိပါတ (သုတ္တနိပါတ်)
၁၁။ ဗုဒ္ဓဝံသ (ဗုဒ္ဓဝင်)
၁၃။ ဇာတက (ဇာတ်)
၁၄။ နိဒ္ဒေသ (မဟာနိဒ္ဒေသ နှင့် စူဠနိဒ္ဒေသ)
၁၅။ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂ (ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်)
* နေတ္တိကျမ်းနှင့် ပေဋကောပဒေသကျမ်းတို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံမူတွင် သံဂါယနာတင်ကျမ်းအဖြစ် အသိမှတ်မပြု။ မိလိန္ဒပဉှာကို ထိုင်းနိုင်ငံရော, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကပါ သံဂါယနာတင်ကျမ်းအဖြစ်အသိမှတ်မပြုပါ။
ခုဒ္ဒကပါဌ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အခြေခံဖတ်စာဟု ဆိုနိုင်သည်။ သရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်း၊ ဆယ်ပါးသီလခံယူခြင်း၊ ၃၂-ကောဋ္ဌာသဆင်ခြင်ခြင်း၊ သာမဏေငယ်လေးများအတွက် အမေးအဖြေတို့ ပါဝင်သည်။ ပရိတ်ကြီး ၁၁-သုတ်အနက်မှ မင်္ဂလသုတ်၊ ရတနသုတ်၊ မေတ္တာသုတ်တို့သည်လည်း ဤခုဒ္ဒကပါဌပါဠိတော်တွင် ပါဝင်သည်။
ထေရဂါထာ, ထေရီဂါထာနှင့် ဓမ္မပဒတို့သည် ဂါထာသက်သက်ဖြစ်၍၊ သုတ္တနိပါတ်, ဥဒါန်းနှင့် ဣတ္တိဝုတ် တို့သည် စကားပြေ အနည်းငယ်ရောထားသော ဂါထာများဖြစ်၍ ဂါထာပေါင်းချုပ်ကျမ်းများ ဟုဆိုနိုင်သည်။ ထေရဂါထာနှင့် ထေရီဂါထာသည် ရဟန္တာအရှင်များ၊ အရှင်မများ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဥဒါန်းကျူးရင့်သော ဂါထာများ၊ အမေးအဖြေများ၊ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနီး သံဝေဂရဖွယ် မြွက်ကြားသော ဂါထာများဖြစ်သည်။
သုတ္တနိပါတ် ပါဠိတော်၌ ပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ကဲ့သို့ တစ်ပါးတည်း ဧကစာရီကျင့်သုံးသော ရသေ့ရဟန်းတို့၏ ခဂ္ဂဝိသာဏသုတ် (ကြံချိုပမာကျင့်ဖွယ်တရား)၊ မုနိသုတ်တို့ပါဝင်သည်။ နိဒ္ဒေသ ပါဠိတော်သည် သုတ္တနိပါတ်လာ အဋ္ဌကဝဂ်၊ ပါရာယနဝဂ်နှင့် ခဂ္ဂဝိသာဏသုတ်တို့၏ အဖွင့်ကျမ်းဖြစ်သည်။
ဝိမာနဝတ္ထု (ဝိမာန= ဗိမာန်) သည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် နတ်စည်းစိမ်ခံစားရပုံ ဝတ္ထုသာဓကများဖြစ်၍၊ ပေတဝတ္ထုသည် မည်သို့ ပြိတ္တာဘဝရာက်ရပုံ၊ မည်သို့ကျွတ်လွတ်ပုံ ဝတ္ထုသာဓကများဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဝင်သည် သုမေဓာရှင်ရသေ့ ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက် ဗျာဒိတ်ခံပုံ၊ ပါရမီဖြည့်ပုံနှင့် ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားမှသည် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတိုင် ၂၅-ဆူသော မြတ်စွာဘုရားတို့၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းဖြစ်သည်။
စရိယာပိဋက ကျမ်းသည် မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘဝက ပါရမီဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ပုံ ပုံဝတ္ထု ၃၅-ပုဒ်အား ပါရမီ ၁၀-ပါး အစီအစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ အပါဒါန် ပါဠိတော်သည်လည်း ဘုရား၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန္တာ အရှင် အရှင်မတို့၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကျမ်း ဖြစ်သည်။
ဇာတက ကျမ်းအား ၅၅၀-နိပါတ်တော်ဟူသော အမည်ဖြင့် အသိများသည်။ မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တွင် ဖြစ်ပျက်သော အကြောင်းအရာတို့ ဆက်နွယ်၍ အတိတ်ကို ဆောင်ကာ ရှေးကလည်း ဤသို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု ဟောကြားထားသော ဇာတ်တော်များ ဖြစ်သည်။ ဇာတ်တော်ပုံပြင် ၅၄၇-ပုဒ်သာ ရှိသော်လည်း အခေါ်လွယ်စေရန် ငါးရာငါးဆယ်ဇာတ်ဟုသာ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်သည် ဓမ္မဒေသနာတို့အား အဘိဓမ္မာဆန်ဆန် အသေးစိတ် ခွဲခြားဝေဖန် ဟောကြားထားသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ သုတမယဉာဏ်, သီလမယဉာဏ်မှ အစချီကာ သဗ္ဗညုတဉာဏ်, အနာဝရဏဉာဏ်တိုင် ၇၃-မျိုးသော ဉာဏ်များအား ဉာဏကထာခန်းတွင် ပိုင်းခြားပြသည်။ သစ္စာအနက် ၁၆-ချက်၊ ၅၂၈-သွယ် မေတ္တာပွားနည်းတို့သည် ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိတော်လာ ဒေသနာများဖြစ်သည်။
ပေဋကောပဒေသ (ပိဋကတ်လမ်းညွှန်ကျမ်း) နှင့် နေတ္တိ (လမ်းညွှန်ကျမ်း)တို့သည် ပိဋကတ်သုံးပုံအား စနစ်တကျ ခြုံငုံလေ့လာသော လမ်းညွှန်ကျမ်းဖြစ်၍ ပိဋကတ်တော်တို့၏ အဖွင့် အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ၊ ဒီပနီကျမ်းပြုဆရာတို့၏ လက်စွဲကျမ်း တစ်စောင်ဖြစ်သည်။
မိလိန္ဒပဉှာကျမ်းသည် ဂရိနွယ်ဖွား တစ်ဦးဖြစ်သော သာဂလပြည်ဘုရင် မိလိန္ဒမင်းကြီးနှင့် အရှင်နာဂသေန (အရှင်နာဂသိန်)တို့ တရားဓမ္မနှင့်စပ်၍ စကားစစ်ထိုးသော ကျမ်းဖြစ်သည်။
🔹 ဆဋ္ဌသံဂါယနာမူ ပါဠိတော်ကျမ်းများ
ပိဋကအားဖြင့် သုံးပုံ, နိကာယ်အားဖြင့် ငါးရပ်သော ပါဠိတော်ကျမ်းရင်းများသည် စုစုပေါင်း ၅၂-ကျမ်းရှိ၏။ ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်မူအရ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရာတွင် အချို့ကျမ်းငယ်များအား တစ်အုပ်တည်းတွင်ပေါင်း၍ ထုတ်ဝေသဖြင့် စာအုပ်ပေါင်း ၄၀ ရှိလေသည်။
(က) သုတ္တန်ပိဋက (နိကာယ် ၅-ရပ်) ကျမ်းပေါင်း ၄၀ (၂၃-အုပ်)
၁။ ဒီဃနိကာယ် ၃-ကျမ်း (၃-အုပ်)
၂။ မဇ္ဈိမနိကာယ် ၃-ကျမ်း (၃-အုပ်)
၃။ သံယုတ္တနိကာယ် ၅-ကျမ်း (၃-အုပ်)
၄။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ ၁၁-ကျမ်း (၃-အုပ်)
၅။ ခုဒ္ဒကနိကာယ် ၁၈-ကျမ်း (၁၁-အုပ်)
(ခ) ဝိနည်းပိဋက (ခုဒ္ဒကနိကာယ်) ၅-ကျမ်း (၅-အုပ်)
(ဂ) အဘိဓမ္မာပိဋက (ခုဒ္ဒကနိကာယ်) ၇-ကျမ်း (၁၂-အုပ်)
🔸 နိကာယ် ၅-ရပ် ဒေသနာတော်များကို ဖတ်ရှုလိုပါက
၁။ ပါဠိတော်များနှင့် ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကျမ်းအစုံကို ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေး၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
၂။ ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာ ဦးစီးသော ဝိပဿနာသုတေသနအသင်း (Vipassanā Research Institute) မှထုတ်သော ဆဋ္ဌသံဂါယနာမူ စီဒီခွေကို အောက်ပါ link တွင် မှာယူနိုင်ပါသည်။
၃။ ပိဋကတ်သုံးပုံ မြန်မာပြန် အစုံအား အောက်ပါ link တွင် download လုပ်ယူနိုင်သည်။
၄။ အကယ်၍ အကျဉ်းချုပ်ကို ဖတ်ရှုလိုပါက ဓမ္မာစရိယဦးမောင်မောင်လေး၏ ပိဋကတ်အနှစ်ချုပ် စာအုပ်များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁။ ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကျမ်းများ (ကျမ်းဦးမှတ်ဖွယ်များ)
၂။ U Ko Lay – The compendium of Buddhism: Guide to Tipiṭaka.
၃။ A.K. Warder- Indian Buddhism.
၄။ ဓမ္မာစရိယဦးမောင်မောင်လေး – ပိဋကအနှစ်ချုပ် ဒီဃနိကာယ် (http://www.kbrl.gov.mm/book/download/003679)
၅။ ဓမ္မာစရိယဦးမောင်မောင်လေး – ပိဋကအနှစ်ချုပ် မဇ္ဈိမနိကာယ် (http://www.kbrl.gov.mm/book/download/003725)
၆။ ဓမ္မာစရိယဦးမောင်မောင်လေး – ပိဋကအနှစ်ချုပ် သံယုတ္တနိကာယ် (http://www.kbrl.gov.mm/book/download/003724)
၇။ ဓမ္မာစရိယဦးမောင်မောင်လေး – ပိဋကအနှစ်ချုပ် အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် ပထမတွဲ ၊ ဒုတိယတွဲ (http://www.kbrl.gov.mm/book/download/003723)
၈။ Bhikkhu Bodhi – In the Buddha’s Words: Anthology of Discourses from the Pāḷi Canon.
၉။ Maurice Walshe – The Long Discourses of The Buddha: A Translation of Dīgha Nikāya, 1987
၁၀။ Bhikkhu Ñānamoḷi and Bhikkhu Bodhi – The Middle Length Discourses of the Buddha: A Translation of the Majjhima Nikāya, 1995.
၁၁။ Bhikkhu Bodhi – The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of Saṃyutta Nikāya.
၁၂။ Bhikkhu Bodhi – Numerical Discourses of the Buddha: An Anthology of Suttas from Aṅguttara Nikāya.
ဧရာ (မန္တလေး) ☸ နိကာယ်ငါးရပ် မိတ်ဆက် ☸ Reviewed by MoeMaKa on 6:00 AM Rating: 5